ဒေါ်သန်းအေးရေးသားသော “စု”နှင့်မိတ်ဆက်ခြင်း | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
thank you, nyi ma lay. I am waiting.
Comment by Anonymous April 7, 2007 @ 3:23 am
အားရင် ဆက်ရေးပါအုံးလို့ အားနာနာနဲ့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေနော်။
ပီဒီအက်ဖ် ဖိုင်နဲ့ရှိရင်လည်း ဒေါင်းလုတ် ယူလို့ရအောင် လင့်ခ်ကလေး ပေးပါလား ညီမရေ ..။
Comment by မေဓာဝီ April 11, 2007 @ 10:27 am
very interesting post. pls, continue..
Comment by Myo February 14, 2008 @ 2:41 am